Chelsea oo isha ku heysa saxiixa xiddiga Real Madrid
Home Horyaalka Ingiriiska Chelsea oo isha ku heysa saxiixa xiddiga Real Madrid
Chelsea ayaa lagu soo waramayaa inay raadineyso inay Eden Hazard dib ugu soo celiso Stamford Bridge. Xiddiga reer Belguim ayaan ku dhicin dhulka Real Madrid maadama uu inta badan dhaawacmay.
Sida laga soo xigtay Defensa Central , Chelsea ayaa diyaar u ah inay la soo wareegto ciyaaryahankeedii hore xagaaga. Warbixinta ayaa sheegeysa in kooxaha waa weyn ee Premier League inay diyaar la yihiin aduun dhan € 40-50 million si ay u helaan ciyaaryahanka reer Belgium.
Eden Hazard ayaa inta badan waayihiisii ​​ciyaareed ee ugu dambeeyay ku qaatay kooxda chelsea laakiin waxa uu uga tagay kooxda Real Madrid sanadkii 2018. Waxa uu ku guulaystay Europe League kulankiisii ​​ugu dambeeyay ee kooxda ka hor inta uuna dhamaystirin riyadiisii ​​uu ugu dhaqaaqi lahaa Santiago Bernabeu.
Si kastaba ha noqotee, wax uma aysan socon sidii Eden Hazard iyo Real Madrid ay filayeen. Weeraryahanku dhaawac badan ayuu qabay mana uusan soo marin qaab ciyaareed wanaagsan Los Blancos.
Chelsea ayaa heysata koox ciriiri ah, iyadoo in ka badan ciyaartoy ku filan ay ku jiraan qeybta weerarka. Si kastaba ha noqotee, fursada ay kula soo saxiixan karto xiddiga Real Madrid waxay noqon laheyd dookh soo jiidan kara maamulka iyo taageerayaashaba.
Previous articleCristiano Ronaldo wuu ciyaari karaa ilaa uu ka gaaro 40 sano waa kuma shaqsiga sidaas yiri.
Next articleGerard Pique ayaa sheegay in garsoorayaasha La Liga ay si miyir la’aan ah u doortaan Real Madrid